Biyo yaraanta Cape Town oo si xun u saamaysay wariye BBC-da ka tirsan | Saxil News Network
Biyo yaraanta Cape Town oo si xun u saamaysay wariye BBC-da ka tirsan
Image captionWariye Maxamed Cali iyo gabadha uu dhalay Khadiija oo ka shaqaynaya sidii ay biyaha u tashiili lahaayeen
Wariyaha BBC-da ee magaalada Cape Town ayaa ka mid ah malaayiin qof oo ay si xooggan u saamaysay biyo la’aanta ku dhufatay magaaladaas, wuxuuna sheegay in xubnaha qoyskiisa sida xaaskiisa ayba xitaa u suurtogali weysay in ay qubeystaan.
Dadka ku nool magaalada Cape Town ayaa u shintirinaya maalinta dhibicda ugu dambeysay ee kaydka biyaha magaaladaas ay dhamaanayso.
Waxa ay hadda dadka isticmaalaan 50 liitir oo biyo ah oo loo qoondeeyay, taas oo aanan ku filneyn qoys dhan.
Safar dhulka ah – Dubai ilaa Capetown
Wariye Maxamed Cali ayaa sheegay in qoyskiisa oo ka kooban 4 qof ay ku qasbanaadeen in ay badalaan dhaqankooda isticmaalka biyaha, iyaga oo aad u tashiila biyaha “caaga iyo jeegga iyo weel kasta oo gurigayga laga helo ayaa hadda noloshayda ka noqday qeyb muhiim, aniga iyo caruurtayda weel yar ayaan ku qubeysanaa ” ayuu yiri Maxamed Cali.
Image captionDad biyo saf ugu jira Cape Town
Abaar xun oo ku dhufatay gobolka Western Cape ee dalka Koonfur Afrika ayaa ku qasabtay in dowladda hoose ee Cape Town ay qoondeyso biyaha, waxaana loo shintirinayaa maalinta 12-ka April oo la sheegay in uu dhamaan doono kaydka biyaha ay magaalada haysato.
Hay’adda lagu magacaabo WaterWise ayaa sheegtay in biyaha lagu qubeysto ay caadi ahaan dhanyihiin 15 litir halkii daqooqo, halka suuliga lagu dhaqo biyo dhan 15 litir.
Meel u dhow garoonka Newlands ee caanka ah, boqolaal dadka reer Cape Town ayaa safaf dhaadheer ugu jira inta uusan waagu baryin sidii ay biyo u helo lahaayeen.
Bil ka hor muuqaaladan oo kale laguma arki jirin magaalada Cape Town.
Shirkadda qamriga samaysa ee Sa Breweries ayaa illaa shan tuubo surtay banaanka dhismaheeda, halkaas oo dadka deegaanka ay biyo nadiif ah ka dhaansanayaan. Biyaha waxa ay ka yimaadaan haro biyo uu ku dhex yaala dhismaha shirkadda.
Amniga goobtan ayaa aad loo adkeeyay, qofkiina waxaa kaliya loo ogolyahay 25 liitir. Waxaa soo baxay warar sheegaya dad meesha ka dhaansanaya illaa 2 kun oo litir, islamarkaasna biyaha sii iibinaya.
Image captionQofkii 25 liitar ayaa loo ogolyahan tuubooyinka
Dad badan oo aad biyaha qamaam ugu ah ayaa la arkayaa iyaga oo biyo ka dhaansanaya buuraha magaalada iyo ilaha kasoo qulqula.
Biyaha ayaa dahab ka noqday magaalada Cape Town oo caan ku ah buuraha iyo xeebaha quruxda badan.
Dadka lacagta heysta ayaa dukaamada waaweyn ka iibsanaya biyaha warshadaysan oo 5 litir ah halkii caag , waxayna caagag badan ku guranayaan baabuurta.
Gurigii ku xad gudba xadka maalinkii loogu talogalay biyaha ayaa waxaa lagu rakibayaa saacad biyaha u tashiisha, waxaana laga qaadayaa lacag dhan $378 oo ah qarashka saacadda.
Laakiin wariyaheena waxa uu kusoo waramayaa in saacadahan ay mararka qaar qarxaan, biyahana ay banaanka ku butaacaan, mararka qaarkoodna ay iska qulqulaan illaa 24 saac ka hor inta la hagaajinayo.
Image captionIllo kasoo qulqulaya buuraha, dadka qaarkood oo qamaam ah ayaa halkaas biyo u doontay
Dhaqamada wax laga badalay waxaa ka mid ah waraabinta beeraha iyo xitaa mashiinada dharka iyo alaabta lagu dhaqo, iyada oo qoyska Maxamed Cali ay hadda isticmaalaan 7 kun litir bishii, halkii markii hore ay isticmaali jireen 18 kun oo litir bil kasta.
Haweenayda ah barasaabka gobolka Western Cape Mrs Helen Zille ayaa dadka ugu baaqday in aysan biyaha nadiifta ah ku dhaqin musqulaha, oo ay isticmaalaan kuwa wasaqda ah oo laftooda ay tahay in ay sii tashiilaan.
Haweenaydan ayaa sanadkii hore sheegtay in todobaadkii ay sadax mar oo kaliya qubeysato si ay u tashiisho biyaha.
Cape Town waxa ay noqonaysaa magaaladii ugu horeysay oo ka